Yakachipa yeICE Chitikiti Matikiti Uye Kufamba Maitiro Ekubhadhara Mitengo | Chengetedza Chitima
Yakachipa yeICE Chitikiti Matikiti Uye Kufamba Maitiro Ekubhadhara Mitengo
musha > Yakachipa yeICE Chitikiti Matikiti Uye Kufamba Maitiro Ekubhadhara Mitengo
Pano iwe unogona kuwana ruzivo rwese nezveGerman's Tiketi dzezvitoro zvechipava uye ICE mitengo yekufamba uye zvakanaka.
Topics: 1. ICE neTreni Zvikuru
2. Nezve ICE Chitima 3. Pamusoro Pfungwa Kuti Utore Ahupu ICE Chitiketi Tiketi
4. Akawanda sei matikiti eICE anodhura 5. Maitiro Ekufamba: Nei zviri nani to tora ICE chitima, uye kwete kufamba nendege
6. Ndeupi mutsauko uripo pakati peiyo Standard Kirasi uye Yekutanga Kirasi pane ICE 7. Pane here kunyorera kweICE
8. Inguva yakareba sei isati yasimuka yeICI chitima kuti isvike 9. Ndeapi ma ICE echitima marongero
10. Izvo zviteshi zvinoshandiswa neICE 11. ICE Zvitima FAQ
ICE neTreni Zvikuru
Chitima chinomhanyisa kwazvo kuGerman chitima cheICE ine kumhanya kwe300km / hr.
Tiye mureza weCE yechitima cheGerman chiteshi chinobatanidza guta rega rega mukati meGerman.
Pazvitima zvese zvinomhanya pa YeGerman njanji system, ICE ndeye chikamu A.
ICE zvitima zvakagadzirirwa kukwikwidza nendege maererano nerunyararo uye nguva yekuenda.
Nzira dzepasi rese dzeICE dzinosanganisira France, Bherujiyamu, Dhenimaki, Ositiriya, Netherlands, uye Switzerland.
Nezve ICE Chitima
Intercity-Express kana mune yayo ishoma nzira zita ICE ndiyo system ye soro-nokukurumidza nezvitima muridzi weDeutsche Bahn, Mupi wechitima wenyika weGermany. The ICE inodzidzisa vanozivikanwa neumbozha, kumhanya, uye nyaradzo pavanobatanidza guta roga roga muGerman.
Iine kumhanya kwakakwira kusvika mazana matatu emakiromita paawa, kufamba neICE chitima ndiyo nzira inokurumidza yekufamba pakati pemaguta ari kure seCologne neHamburg.
ICE Kufamba Nzira haina kuganhurirwa kuGermany. Chitima chinomhanya munzira dzepasi rese kuenda kuAustria, Furanzi, Bherujiyamu, Siwizarendi, Dhenimaki, uye Netherlands.
Enda ku Sevha Iyo Chitima Yeji kana kushandisa iyi yejeti kutsvaga anodzidzisa matikiti eIchina Zvitima
Pamusoro Pfungwa Kuti Utore Ahupu ICE Chitiketi Tiketi
nhamba 1: Bhuka matikiti ako eICE kumberi zvakanyanya sezvaungagona
Kana uchida kuenda matikiti eICE akadhura, yekutanga iwe unozvitenga, iyo huru mikana yako yekuzviwana zvakachipa. Pane 3 mhando dzeCheap ICE fares uye ese matatu matatu matikiti marudzi anowanikwa panguva yekutanga kutengesa nguva, asi saver anobhadhara, Saver mutengo, uye Super sparpreis inogona kunge isingawanikwe sezvo zuva rekuenda richiswedera. Iwe unogona bhuku saver mari yetikiti kutanga 6 mwedzi isati yaenda.
nhamba 2: Raira yako ICE matikiti echitima kana uine chokwadi nezvekufamba kwako
Kuve nechokwadi cherwendo rwako uye zuva rekubva rinokuchengetedza mari mumari yekudzosera. Iyo mwero wekudzoreredzwa uye nesarudzo yekudzosa asina kushandiswa matikiti eICI anoenderana nerudzi rwetikiti raunotenga. wo, mari yekudzorera yakadzikira kumatikiti ekusever kupfuura emitengo yemitero. Ziva kuti DB haizokudzosere mari kana iwe uchidzorera tikiti rako. DB dzoserwa dzinoitwa kuburikidza neDB voucher, iyo iwe yaunogona kushandisa kubhadhara kune chero sevhisi yavanopa. Iwe unogona zvakare kutengesa yako Matikiti eICE online pamhepo maforamu kana iwe uchida kudzosera mari.
nhamba 3: Kufamba neICI chitima panguva yekusiya-yepamusoro nguva
Matikiti eICE anodhura mumwaka we-off (Chipiri, Chitatu, China, uye Mugovera). Munguva yemazuva epamusoro, matikiti akadhura anotengesa kunze nekukurumidza, uchisiya chete matikiti eFlxpreis. Kufamba paPeak mazuva, bhuku pamberi kumberi kuwana saver mari matikiti. Kana iwe usingakwanise kuwana saver yeti tikiti, uve nechokwadi chekufamba pakati pekusvika mangwanani uye kutanga kwemasikati (nekuda kwevafambi vebhizinesi) sezvo matikiti eFlexpreis angave akadhura ipapo. Pakupedzisira, usapfuurira mberi pachena uye mazororo echikoro sezvo ICE tikiti mitengo ichawedzerawo.
nhamba 4: Tenga matikiti ako eICE paSave A Chitima
Iwe uchawana chinopa chakanakisa cheICE matikiti echitima muEurope pane yedu webhusaiti, Chengetedza Chitima. Isu tine chikuru chinopihwa chematiketi echitima muEurope nepasi rose. Nekubatana kwedu kune vasingaverengeke vevashandi vezvitima uye nemaitiro ekurudyi, isu tinokupa iwe yakachipa ICE matikiti aunogona kuwana. wo, tinowana dzimwe nzira dzinodhura dzezvitima kunze kweICE.
Akawanda sei matikiti eICE anodhura?
Mutengo weti yeICE inoenderana nerudzi rwetiketi uye kirasi yezvigaro zvaunoda. nyanya, njanji German inozivikanwa neayo yakaderera ICE tikiti mitengo. Kune matatu matatu matiketi eICE chitima - yakajairwa kana Flexpreis tikiti, iyo Supersaver tikiti yetikiti kana Supersparpreis, uye saver fare kana Sparpreis ICE matikiti. Iwo ma saver maikiti matikiti akadhura pane akajairwa matikiti, asi matikiti aripo anoderedza sezvo zuva rekuenda rinoswedera. Mitengo ye tikiti yeICE zvinoenderana nekirasi yaunosarudza uye heino tafura yekupfupisa yemitengo yepakati yekirasi:
Maitiro Ekufamba: Nei zvirinani kutora iyo ICE chitima, uye kwete kufamba nendege?
1) Regedza Pre-Boarding Maitiro. Kana iwe uine ndege ne 9 ndiri, iwe zvirinani kuve paairport kanenge ne 7 Nekudaro nenguva iyo yaunofanirwa kunge wakafamba kuburikidza nePre-Boarding Maitiro uye macheki macheki, Inenge yave nguva yekuti ukwire ndege.
ICE zvitima, iwe unogona kusvika chero nguva usati waenda chero bedzi iwe uchiipinza muchitima usati waenda. Izvi zvinogoneka nekuti hapana maPre-Boarding maitiro kana marefu-ane mhepo yekuchengetedza macheki. Ingo ratidza kumusoro kune chiteshi, tsvaga chitima chako pachiratidzo, uye bhodhi!
Munguva yakazara yekufamba, ICE inokunda nendege kuGerman sezvazvinoita pamutengo zvakare. Asides kubva nguva yakapambadzwa mu Pre-Boarding maitiro, ndege dzinorasikirwa neakawanda nguva kufamba mukuenda (kubva panhandare yendege kune chaipo nzvimbo).
2) Mari dzezvikwereti. Iwe unogona kuve nechokwadi chekuti iwe uchabhadhara yakawedzera masutukesi kana uchifamba nendege. zvisinei, Kana iwe uchifamba neICE Zvitima uchibhadhara mitoro yemutoro imari yekuwedzera yausingaite kana ukatenga zvakachipa ICE chitima matikiti. Kujekesa, ne mitengo yakachipa yeICE, haufanirwe kubhadhara kune chero sutukezi yaunofamba nayo. Izvo zvinoita kuti ICE ive yakachipa uye iri nani nzira yekufamba.
3) Zvitima zvakanyanya zvakatipoteredza-ane ushamwari. The ICE chitima iriwo zvimwe zvakatipoteredza-zvine hushamwari pane ndege, izvo zvinoita kuti mhepo kusvibiswa. Kufamba nechitima kuri 20 × kushoma kabhoni kuburitsa kusvibisa pane kufamba nendege.
Ndeupi mutsauko uripo pakati peiyo Standard Kirasi uye Yekutanga Kirasi pane ICE?
Kusiyana nezvimwe zvitima nezvitiketi zvemakomendi akasiyana (standard, bhizimisi, mukuru, nezvimwewo.) sezvakaita muTrenitalia, ICE yeGerman yakati siyanei. Kune makirasi maviri mune yega yeCE chitima - yekutanga kirasi uye yechipiri kirasi. Misiyano mikuru pakati pezvikamu zviviri ndiwo mutengo, kuchinjika, uye masevhisi anopihwa.
Izvo zvine chekuita nematikiti uye makirasi makamuri mune iyo ICE chitima, chero tiketi yemhando inogona kuva mune yekutanga-kirasi. Izvi zvinoreva kuti kunyangwe iyo zvakachipa ICE chitima matikiti, mutengo we saver, uye Super sparpreis inogona kukwanisa-yekutanga zvigaro. zvisinei, mutengo unosiyana kune ese makirasi, sezvinoonekwa pamusoro.
Chekutanga Kirasi ICE Matikiti:
Yekutanga I-kirasi yekutanga inomisa chiyero chekumbozorora, nyaradzo, uye basa rakanakisa mune yeGerman njanji system. Yakagadzirirwa ndege dzemakwikwi, ICE zvitima zvinopa nyaradzo yenzendo refu-daro. Mukuwedzera, makamuri ekutanga-kirasi anogadzira chinenge chikamu chimwe muzvitatu chechitima uye anogona kunge akawanda semakamuri matatu zvichienderana neICI chitima chakatorwa.
Iwo ekutanga-kirasi komichi zvigaro yakakura uye yakarongedzwa zvakasiyana mune a 2-1 kurongeka kwete a 2-2 mukirasi yechipiri. Uye izvi zvinosunungura imwe nzvimbo yepasiti yevatakuri. Uyezve, zvigaro mukirasi yekutanga yeICE zvakafukidzwawo nenhema faux uye zvakakura pane izvo zviri mukirasi yechipiri. Sezvo vanhu vebhizinesi vanowanzo shandisa kirasi yekutanga, kune matafura akasimba anowanikwa kune vafambi vanoda kuita rimwe basa vachiri munzira.
Iwo ekuwedzera masevhisi anosiyanisa yekutanga kirasi kubva kune yechipiri kirasi pane ICE zvitima anosanganisira mahara, mapepanhau ezuva nezuva, yemahara isina muganho WI-FI, uye akakosha amplifiers kudzivirira kukanganiswa mukutambirwa kwefoni. Vatambi veKirasi yekutanga vanogona zvakare kuodha chikafu chavo kubva pazvigaro zvavo kana vasingade kuenda kuresitorendi iri muchitima.
Imwe perk inogumira kune ICE yekutanga-kirasi vafambi ndeye chigaro kuchengetedza. Matikiti ese ekutanga-kirasi, kusanganisira matikiti eICE akadhura, Nakidzwa nerubatsiro urwu. Haufanire kunetsekana nekungoerekana wawana chigaro chefafitera; Unogona kusarudza kuti ndeipi chigaro chaunoda paunenge uchiverengera mabhuku uye wochichengeta.
Second Class ICE Matikiti:
Makosi eChipiri echikamu haana kure kubva kuKirasi yekutanga mukunyaradza. Pamusoro pe, zvigaro mukamuri yechipiri-kirasi zviri nani pane avhareji zvigaro zveairline. Uyezve, ivo ergonomic, huya nemusoro, uye yakafukidzwa mumucheka wakagadzirwa. Izvi zvinoita kuti rwendo rurefu rakareba rurefu.
Kune mamwe makamuri epiri-kirasi pane yeCE chitima pane Yekutanga Kirasi. kunyanya, gadziriro yekugara mukirasi yechipiri yakati simbei pane iya yekamuri yekutanga-kirasi. Kune zvigaro zvina pamutsara (2-2 kurongeka kwechigaro), nezvigaro zviviri zvese zvinogoverana yepakati handrest.
Uyezve, vafambi mukirasi yechipiri vanowana mamwe masevhisi mukirasi yekutanga asi aine miganho. Tora iyo WI-FI semuenzaniso. Mukirasi yechipiri, Wi-Fi haina muganho sezvazviri kune Chekutanga kirasi vafambi. Vatakuri vechipiri-kirasi zvakare havana mukana wekuwana mapepanhau ezuva nezuva mahara saka kana iwe uchida kuwana bepanhau mukirasi yechipiri, iwe unofanirwa kutenga imwe.
Chechipiri-kirasi vanofamba vanofanirwa kuenda kuresitorendi kana vachida kuhodha chikafu. Ivo havagone kuodha kubva pazvigaro zvavo sezvazviri muICE yekutanga-kirasi kamuri. wo, ICE yechipiri-kirasi matikiti mune ese ari maviri Flexpreis uye saver fares hazvingoerekana zvivhara zvigaro zvigaro. Kana iwe uchida kuchengetedza chigaro muChipiri kirasi, iwe unofanirwa kubhadhara imwe yakawedzera ye € 6. Saizvozvo zvese Chekutanga Kirasi uye Chechipiri Kirasi Vapfuuri vane magetsi panzvimbo yese.
MuNuremberg kuna Bamberg Zvitima
MuFrankfurt kuna Bamberg Zvitima
Stuttgart kuna Bamberg Zvitima
KuDresden kuna Bamberg Zvitima
Pane here yekunyoresa kweICEmusangano?
ICE inopa njanji kupfuura pa zvakachipa ICE Chitima mitengo yekufamba isina muganho muGerman kana Europe. Kune mhando nhatu dzechitima dzinopfuura:
Iyo yekuGerman njanji yekupfuura ndeye yekufamba isina muganho mukati meGermany. wo, ndezve vafambi vasingagare muEurope, Teki, neRussia. Mamwe mabhenefiti eGerman Rail Pass anosanganisira:
Vanobata njanji vanopfuura vanogona kushanyira dzimwe nzvimbo dzebhonasi kunze kweGerman (Salzburg, Venice, uye kweBrussels)
Akadzikiswa ICE matikiti echitima evose vari pasi 28 makore
Unlimited Unofamba muGermany yose
Vanhu vaviri vanogona kuchengetedza imwe mari nekushandisa iyo Twin Pas kana vachifamba pamwechete
Kuchinjika kunobvumira vakabata vechitima cheGerman kufambisa kuenda chero nguva chero nguva
Vabati veGerman pass vanogona kusarudza kubva 3 kuti 15 akateedzana mazuva ekufamba mukati memwedzi kana uchitenga pass.
Iyo Eurail pass inobvumidza vasiri veEuropean vanogara kunze kweRussia, Europe, neTurkey kuti ifambe isina muganho yakatenderedza Europe. Zvimwe zvinhu zvinosanganisira:
Vouchers uye discounts zvevashanyi zvinokwezva.
Mhando dzakasiyana dzekusarudza kubva - Vakuru, Mukuru, uye Upwere.
Unlimited unofamba kuburikidza 31 nyika dzokuEurope, kusanganisira Turkey.
Iyo InterRail inopa rubatsiro vanhu vanogara muRussia, Teki, kana kuEurope kusaganhurwa kwekufamba muEurope yose. Nzira dzekupasa idzi dzinosanganisira:
Discount on Matikiti eICE kune vese vadiki nevakuru vanhu.
Kuenda hakuna muganho kuenda 33 nyika muEurope
Mahara echitima chemahara kune Pass vanobata vanofamba nevana vanosvika vaviri pasi 11 makore.
Nguva yekufamba kwe 3 mazuva eku 3 mwedzi pamunhu.
Kupfuura kwega kwega kunowanikwa uye kunofanirwa kuve kunoitwa mukati 11 mwedzi yekutenga.
Inguva yakareba sei isati yasimuka yeICI chitima kuti isvike?
Kuona kuti unosvika nenguva yekukwira, gadzikana, uye kunyange ongorora zvitoro, unorayirwa kuti usvike 30 maminitsi nguva yako yekuenda isati yasvika.
Ndeapi ma ICE echitima marongero?
Magama echitima haana kugadziriswa, izvo zvinoita kuti zviome kupindura. zvisinei, iwe unogona kuwana ICE yechitima mashedhi mune chaiyo-nguva pane iyo Sevha Achitima peji rembwa. Isa kwawakatangira nekwauri kuenda uye uwane nekukurumidza kuwana kune ese ICE matemu echitima. Yekutanga ICE chitima chinobuda ne 6 ndiri, nezvitima zvichisiya zvese 30 maminetsi kuenda kunzvimbo huru.
Izvo zviteshi zvinoshandiswa neICE?
ICE nzira dzenyika dzese dzinobva munzvimbo dzinoverengeka dzenyika, pakati pavo pane Brussels Midi Zuid (Brussels Midi South Chiteshi muChirungu), Arnhem Central, uye Amsterdam Central, uye zvakawanda.
Zvekusvika, ICE inodzidzisa svika 11 Zviteshi zveGerman uye chimwe chiteshi cheSwitzerland. wo, zviteshi zvikuru zvekuuya zvinosanganisira Oberhausen, Duisburg, Düsseldorf, Cologne, Nhandare yeFrankfurt (Frankfurt Main Airport), Manheim, Siegburg, uye nevamwe.
Uyezve, Dusseldorf iguta rakanaka riri pedyo neRhinine ine nhoroondo yakapfuma yetsika uye manzwiro. Kune akawanda anozivikanwa etsika uye enhoroondo zvinokwezva kuti zvionekwe uye yevedza migwagwa yekufamba uye nzvimbo huru yekutenga. Iyo inzvimbo yakakwana ye vhiki kupera neshamwari kana mhuri.
Kubva kuAmsterdam Central (Centraal iri muchiDutch uye zvinoreva Central Station), unogona kusvika muFrankfurt, iro guta rinozivikanwa seEuropean capital capital. Chii chimwe, pane mahombekombe akanaka, mamiziyamu, uye maresitorendi ekushanyira.
Cologne ndiyo yepakati pehunyanzvi, akitekicha, uye akapfuma munhoroondo. Ndiine ICE chitima kubva kuAmsterdam Centraal, iwe unogona kusvika paCologne kuti uzvinyurire mune iyo runako iri guta rino.
chaizvo, kune yakanaka kwazvo zvinoshamisa botanic magadheni, maresitorendi ane hupamhi hwemhando yepamusoro yezvipfeko zveonoono, nzvimbo dzinochengeterwa mhuka, mamiziyamu, uye pubs kunakidzwa. wo, kana usina chokwadi chekuti chiteshi chani chauchasarudza, algorithm yedu ichakubatsira kusarudza.
MuFrankfurt kuna Heidelberg Zvitima
Stuttgart kuna Heidelberg Zvitima
MuNuremberg kuna Heidelberg Zvitima
Bonn kuna Heidelberg Zvitima
ICE Zvitima FAQ
Chii chandinofanira kuunza neni kuICE?
Kunze kwewe? Huya negwaro rako rekufamba, pasipoti inoshanda, uye inishuwarenzi yekufamba haisi yekumanikidza asi gwaro iri rakanakira hutano hwako.
Iyo kambani ine muridzi weICE?
Iyo Intercity-Express (chando) ndeyavo neyeGermany yenyika chitima mupi, iyo Deutsche Bahn, uye DB ndeyeGerman Federal Government.
ICE inonyanya kumhanya mumaguta eGermany. Kune mamwe epasi rese ICE nzira dzekufamba kune dzimwe nyika dzinoganhurana neGermany.
Ndeapi ma boarding maitiro eICE zvitima?
Iko hakuna mafirst boarding maitiro. Paunosvika pachiteshi, tarisa mabhodhi ezviratidzo kuti uwane chitima chako. Mukuwedzera, unogona kukwira chitima chero nguva isati yakatarwa kuti ibve.
Ndeapi masevhisi aripo pane ICE chitima?
ICE Chitima inopa mukufamba kwekudyira uko menyu ine chikafu, zveshuwa, nezvinwiwa zvemarudzi ese. Uyezve, kune kuchaja chiteshi padivi pechigaro chese, vakasununguka WiFi (unogumira muKirasi yekutanga), uye amplifera ekusagadzirisirwa runhare kugamuchira (Chekutanga Chekutanga).
Yakanyanya Kunokumbirwa ICE FAQ – Ini ndinofanirwa here kubhuka chigaro pamberi peICE?
Haufanire kubhuka chigaro pamberi, asi iwe unogona kugadzira pekugara kana uchida. Kana iwe uchitenga tikiti rekutanga-kirasi, iwe unobva wakwanisirwa nzvimbo yemahara yakachengetwa chigaro.
Iko kune WiFi internet mukati meICE?
Ehe, pane. MuChipiri kirasi komisheni, WI-FI internet ndeye mahara asi isina muganho sezvazviri muChikoro Chekutanga.
Konstanz kuna Lindau Zvitima
Memmingen kuna Lindau Zvitima
Biberach kuna Lindau Zvitima
Ulm kuna Lindau Zvitima
pakupedzisira, Kana iwe wasvikira kure izvi, iwe unoziva zvese zvaunoda kuziva nezve ICE zvitima uye wakagadzirira kutenga yako yeICE chitima cheti SaveATrain.com.
Iwe unoda here kubatidza peji ino kune yako saiti? Click pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-ice%2F%0A%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code), Kana kuti unogona kungobatanidza zvakananga kune ino peji.